Ukucutshungulwa Kokudla eNingizimu Afrika
Umphakathi wanamuhla ohlala edolobheni uncike kakhulu ekutholeni kokudla okuhleliwe. Ukuhlala kude namapulazi nokuya emsebenzini kusebenza kushiya isikhathi esincane sokupheka ekhaya ngisho nesikhathi esincane sokukhulisa ukudla kwethu.
Ukucubungula ukudla kusindisa isikhathi, kuyindlela elula yokwengeza izakhamzimba ekudleni futhi kusiza abalimi, hhayi ukuguqula iminikelo yabo yomkhiqizo kepha futhi basebenzise umkhiqizo owengeziwe futhi bandise i-raflufu nokutholakala kude kakhulu kwesikhathi sokukhula.
Ukucutshungulwa kwezithako ezingavuthiwe njengezithelo nemifino kubandakanya ukomisa, umnkantsha, ujusi, ukubila nokuqhubeka kokulungiswa kokulondoloziwe, ukhukhamba nemikhiqizo engezwe ngevelu.
Ngokunjalo nezinto zokusetshenziswa ezifana nenyama, ubisi nezinhlamvu kusenziwa futhi kugcinwe kepha lolu luhlu lwezindatshana lizochaza amasu okusebenza ayisisekelo wezithelo nemifino.
Ukugabha izithelo, imifino nokunye ukudla okufana nezinhlanzi nokudla okulungiselelwe kubandakanya ukufaka uphawu lokudla okungaxinzekanga emoyeni ezitsheni bese kudalulwa umkhiqizo okheniwe ekwelashweni okushisa....more
Inqwaba yezithelo zaseNingizimu Afrika, ezinjengezithelo zomvini, ama-apula, amapentshisi, ama-apula, amapharele, ubhanana wemango. Ukomisa kususa umswakama, okhuthaza isikhunta, imvubelo nokukhula kwamagciwane, ngenxa yalokho kuthuthukisa i-raflufu...more
Ukuvutshelwa inqubo lapho izidalwa ezincane eziguqula izitashi (ama-carbohydrate) noshukela zibe yimikhiqizo efana notshwala (amawayini) nama-asidi afana ne-lactic acid (ushizi) ne-carbon dioxide (ubhiya)....more
Uqhwa nokomisa iyindlela yezobuchwepheshe yokugcinwa kokudla. Ngale nqubo, ukudla kunqunyelwa ngamanzi ngaphansi kwengcindezi ukuze kulondolozwe umsoco nokunambitheka kwakho....more
Ukucutshungulwa Kwezithelo eNingizimu Afrika
Abalimi bezithelo bangangeza inani izithelo zabo ngochungechunge lwezinqubo. Izithelo zingomiswa, zigotshwe, zenziwe izimbotshana, zisulwe, zenziwe ushukela noma zigayiwe. Ukucutshungulwa kungenzeka kwenzeke epulazini...more
Njengoba umhlaba uba wedolobha ngokwengeziwe futhi abantu behlala kude nalapho okukhiqizwa khona ukudla, kunomkhuba wokukhulisa inani lemikhiqizo yezolimo eluhlaza....more
Wathola ukuthi ukushisa ubisi ekushiseni okuphezulu abesekupholisa masinyane ngaphambi kokufaka i-bottling noma kwephakethe kuyo kungagcina kusha isikhathi eside....more
Ukhukhamba kungukudla okugcweziwe kwizisombululo ezinosawoti noma ze-acid ezisiza ukuvikela ukonakaliswa. Kuyasiza nokugcina futhi kunambitheke ukunambitheka nokuthungwa kokudla....more
Ukushunqisa ukudla kungumkhuba wasendulo; enye yezindlela zokuqala zokupheka nokulondolozwa kokudla okufana nenyama nenhlanzi. Izicelo zesimanje zokubhema njengokulungiswa kokudla zifaka phakathi ukumasha inyama ngaphambi kokubhema...more